KUCHINJA KWEMAVHANGI ANOSANGANISWA - THE INDIAN FACE
Pave paine vafambi vazhinji vakasarudza kuroja a camper van ino mwaka wezhizha uye nekudaro sarudza akasiyana siyana enzvimbo anosanganisira izvi, panzvimbo peimwe chete. Fungidzira uchimuka chero kupi, kungave iro gungwa kana makomo, uchiperekedzwa neruzha rweshiri dzekutanga uye Zuva iro rinotanga kutya kutaura mangwanani akanaka kwauri. Buda uye unoyemura nzvimbo yakanaka yakakukomberedza, uye pfeka magirazi edu kuti unyatsogadzirisa maziso ako kune chiedza chemangwanani. Inzwa mhepo uye runyararo, zvese zvisingazive neruzha rweguta iro dzimwe nguva rinonyura zvishoma. Ndokunge, ruzivo rwekufamba uye kusarudza nzira uchienda ... wakambove wakasununguka here? Pakupera kwezuva, aya mararamire ekungofamba-famba anotsvaga kuve iyo nzira yekutiza, imwe nzira, mukana wekubvisa nekubatana panguva imwe chete. Uye tinoziva kuti havazi vese vangade kusiya zvese kuti vararame nezvakanaka uye vasasungirwe chero chinhu (isu vekutanga, tinofanirwa kuramba tichiuya kuhofisi), asi izvo hazvireve kuti isu hatisarudze izvi kushandisa zororo rakasiyana. Uye sesu, vamwe vazhinji! Kune izvi zvese, mu The Indian Face Isu takanyatsoteerera kune uyu mutsva maitiro uye tinoda kukuudza zvese zvatakawana. Ndiani anoziva ... pamwe ndiwe unotevera kuenda ku #VanLife!
KUSVIRA KWAKAITIKA SEI?
Mushure mezvirambidzo zvehosha, hazvidziviririke kufunga kuti nzanga yave kunyanya kuita godo nekuvanzika kwayo kana zvasvika pakufamba, panguva imwechete iyo chishuwo chayo chekusiya nzvimbo yayo yekunyaradza nekuongorora nzvimbo idzodzo chakura. , iyo yaimbove iri kumashure. Sekuunganidzwa Nyika Kubva pane fungidziro yebazi remotokari, chirimo chino zviuru makumi mashanu nezvishanu zvemunyika uye zana nemakumi mashanu emota dzimba dzekunze dzakazadza migwagwa yeSpain. Asi chii chiri nezve #VanLife iyo yakwezva vanhu vazhinji?
Musiki wesangano pasocial media aive Foster Huntington (@fosterhunting) mu2011, uyo akasarudza kupa hupenyu hwake semugadziri kuRalph Lauren kutamira kuVolkswagen Syncro kubva pamakumi masere. Kuve mudiwa mukuru wekusweta, Huntington akafamba nemhenderekedzo yeCalifornia akatakura mutsara we Kumba ndiko kwaunoripaka ("Kumba kwako ndiko kwaunopaka"). Chokwadi ndechekuti, kunyange hazvo asiri munhu wese anoda kusiya zvese oenda hupenyu hwekutama-tama, kune vazhinji vanozviona seyakanakisa sarudzo yekumisa uye kunzwa rusununguko rwakazara rwemugwagwa uye zvakasikwa, kunyanya munguva yezororo. Ichi chiitiko chemagariro pasina mubvunzo chauya kuzogara. Uye iwe, unotsunga here?
NEI UCHISARUDZA Ruzivo RWOKUFAMBA MU KAMPANI VAN?
Kufamba nekambasi kunogona kuve pamberi uye shure. Mune mamwe mazwi, nei uchisarudza imwechete yekuenda iwe iwe uchikwanisa kuona zvimwe zvakawanda murwendo rwumwe chete? Icho chiri pamusoro pekuchinja kwepfungwa uye hupenyu. Kuziva kukanganisa kwemamiriro ekunze kwechimwe nechimwe chezviito zvedu uye kuva, muzvinhu zvakawanda, kuzvikwanira. Hapana chinhu chinopambadzwa parwendo rwakadai, kunyangwe nguva. Zuva rega rega kunetseka kutsva kunozvarwa, matambudziko matsva, maonero matsva anokwanisa kutora hiccups yako kure. Asi kana iwe uchiri kusaziva chaizvo zvikonzero zvakaita kuti vakawanda vakaroorana uye mapoka eshamwari vasarudze izvi musasa ruzivo kushandisa mazororo, pano tinonyora iwe mamwe emapoinzi mukutsigira izvo pasina mubvunzo zvichakubatsira iwe kusarudza:
Iyo inokutendera iwe kuti uzive mazhinji akanaka uye akavanzika nzvimbo.
Inokupa iwe rusununguko kuronga yako nzira paunenge uchienda.
Iwe unodzidza kurarama nezvakanaka uye zvinodikanwa.
Iwe unochengetedza pane pekugara uye kufamba.
Unonakidzwa nekambani zvisina kumboitika kare.
CHII CHINONZI ZVAKANAKA KAMPEDI VANS?
"Camper" ichiri musanganiswa pakati pevan ne motahome, asi inopindura zvakanyanya kune yekutanga mazwi. Kana zvasvika pakutyaira, kubata kwacho kwakafanana chaizvo neya mota nekuda kwehukuru hwayo, uye mitengo yacho yakatenderedza 37 zviuru zveeuros. Idzo imotokari dzakashandurwa kuti vagare pamwe nezvinokosha uye, kusiyana nemota dzemotokari, hadzisi zvimiro zvakaiswa pamuviri asi zvakazogadziriswa kuti zvive "Mota dzekumba".
Mukati me misasa yemisasa tinogona kuwana hukuru hutatu kusarudza zvichibva pane chiitiko chatinoda kunakidzwa. Iyo mini musasa zvakajairika zvinogona kuve mamodheru akadai se:
Kune rimwe divi isu tine iyo svikiro, Pakati pazvo patinogona kuratidza mamwe mamodheru akadai se:
Ndinogona kuti mukati meboka iri mugoziva iyo yakajairika Volkswagen yeAmerican mafirimu ema80. Kunyangwe mune akateedzana Outer Banks, imwe yazvino zviitiko zveNetflix, chingangova chirongwa chose chinoitika kuseri kwegumbo reVolkswagen Kombi Westfalia yekare.
Uye pakupedzisira taizowana iwo mamodheru e kukura kukuru, sei:
Aya marudzi emaveni anokutendera kuti ufambe. zvirokwazvo nenzvimbo yakawanda. Ivo vanopa yakakura kunzwa ye "imba ine mavhiri" nekuti, mushure mezvose, ivo vakashongedzwa zvakakwana. Idzo mota dzakagadzirirwa mhuri kana mapoka eshamwari, uye kurarama chimwe chinhu chakadai muboka kunoita kuti ruzivo rwacho rwunakidze uye rukudziridze kupfuura zvaunofungidzira.
VAN RENTAL: YABABA VAN
Pamwe kutenga kambasi haisi yekutanga sarudzo inouya mupfungwa kana iwe uchifunga nezvazvo Joinha #VanLife. Ndiri kureva, kushamisira asi kwete zvakawanda, handizvo? Nyarara! Mhinduro yacho yakafanana neyezvimwe zvinhu zvakawanda: rent. Muchokwadi, kwave kuine makambani akati wandei akabatana neichi chakatarwa chikamu, ane avo Instagram mafaera anounza pamwechete vanhu vakaita sewe neni takafunga kupedza mazuva mashoma kumahombekombe kana mumakomo mune imwe kambasi. Imwe kambani yakadaro ndeye Munhenga Van (@thefeathervan), Uye isu hatina kukwanisa kuzvifarira zvakanyanya! Iyi kambani inokutendera iwe kuroja mhando dzakasiyana dzemavans muMadrid neBarcelona kwavakapa mazita seBahamas, Bali, Ohana, Arizona ... vese vanoita kunge vasingatendeseki! Tinoda mweya unofemerwa nemhando yavo yebhizinesi nekuti yakazvipira kugovana zvakasarudzika zviitiko uye vanotobvumidza mhuka dzinovaraidza. Vakafunga zvese! Yakagadzirwa ne kuchinja Alba Paul Ferrer (@albapaulfe) uye shamwari yake Lucia (@lmedrano_), Uye zvakare rave iri rakakwana zano rekutiza kune vamwe vanhu vakaita saMarta Riumbao (@riumbaumarta, Luc Loren (@luclorenkana Magali Dalix (@magalidalix). Muchikwata chedu isu tiri kutotarisa kuti tione vhiki ripi ratinoenda, ini handizokuudza zvimwe. Chinhu chakanakisa ndechekuti yavo webhusaiti inokutendera iwe kuti uone iyo kuwanikwa kwemuenzaniso wega wega wemazuva aunoda, uye inotsanangura chaizvo zviyero zvevha imwe neimwe pamwe nezvivakwa zvayinazvo. Zviri kwauri kuti usarudze nzira yaunoda kuita uye, kubva ipapo, unakirwe nayo zvizere. Miromo yedu iri kudiridza neichi chikuru zano.
KO KUTI UNOGONA KUZIVA ZVAKANAKIRA NZVIMBO DZESPAIN KUFAMBA NEKAMPI?
Kufamba ne camper van inokodzera vanoda zvisikwa, ringave iro gungwa kana makomo. Pakutanga kwechinyorwa isu takaratidzawo shanduko yemagariro iyo COVID yaunza nayo, uye nekuona nyika yedu yega yave sarudzo yakanakisa yekushandisa mazororo uye nekudaro kusimbisa kushanya kwemuno nehupfumi hweSpain. Ndiani anoda kuenda kunze aine akanaka magariro uye mamiriro ekunze atinawo pano?
Sezvakataurwa nemaforamu akasiyana siyana uye nharaunda dzevadi vemisasa, nzvimbo dzakanakisa dzemakomo kufamba nevha yerudzi urwu inzvimbo ye Pyrenees, Peaks eEurope y Sierra Nevada. Asi kana, pane kudaro, shamwari dzako newe urikutsvaga chimwe chinhu chakanyanya kugungwa, vanokurudzira nzvimbo senge Rías Baixas, Tarifa y iyo Costa Blanca.
Uye kana mushure mezvese izvi usati wafunga kujoina iyo #VanLife, fungidzira kuti nyika yako ingatarise zvakanaka sei imwe yemakopu edu.
Ungasarudza sei Camper van?
Paunenge uchisarudza modhi yevan zvakanyanya kukosha kufunga nezve iyo huwandu hwevanhu iyo ichafamba mairi. Zvakawanda sekureva kwechirevo kuti "panokwana maviri, matatu anokwana", kana uchiita aya marudzi enzira munzvimbo isina kukwana, nyaradzo inguva yekuwedzera; Izvo zvinoita kuti iwe unakidzwe neruzivo zvakanyanya. Kune rimwe divi, iyo mutengo ndechimwe chinhu chekufunga nezvacho, saka tinokurudzira kuti uzvibvunze mibvunzo yakadai seiyi: Neichi nguva zhinji ungafamba nekamba here? Zvingani makiromita ungakwanisa kuita gore here? Ichokwadi ndechekuti, kunyangwe chiri chekuvhara mubhadharo, iko kudyara kwakakosha kwazvo. Spoiler: mushure merwendo rwerudzi urwu ... iwe uchazoda kudzokorora zvechokwadi.
Iyo Camper yakakosha zvakadii?
Sezvo mune mamwe madhipatimendi mazhinji, iwe unogona kuwana dzakasiyana siyana mitengo uye zvese zvinoenderana nechiratidzo, chigadzirwa uye maratidziro. Muchiitiko checamper van, mitengo yakatenderedza 15.000 na30.000 ma euro. Nekudaro, sekukuudza kwatakaita mune chimwe chezvikamu zvakapfuura, panogara paine iyo sarudzo yekurenda. Mitengo mune ino kesi inoenderana zvakanyanya pahuwandu hwemazuva iwe aungade kuve nayo kombi, asi hapana mubvunzo kuti vazhinji varipo vashandisi vemota idzi vanokurudzira kuroja kutanga kuitira kuti vawane iko kwekutanga kusangana, kuti urege kufarira chiitiko !
Kupi kupaka kombi?
Ichokwadi kuti pari zvino pane nzvimbo dzakawanda dzakachengetedzwa uko macaravan kana maveni asingatenderwe kupaka. Nekudaro, nemugwagwa unenge wakadzidzwa hauzove nedambudziko kushandisa husiku. Iwe uchawana kunetseka kukuru mumaguta makuru. Semuenzaniso, kana yako Camper nzira inosanganisira kupfuura nepakati peMadrid, pane paki yemota refu-refu kuTembere yeDebod kwaunogona kusiya kombi yako kwemaawa gumi nemaviri. Nekudaro, iyo yakawanda nzira yakawanda inosangana misasa uye musasa musango saka, kunze kwekunge iwe ukaona chikwangwani chinorambidza chaizvo, hauzove nedambudziko rakakura.
Zvinodhura zvakadii kugadzira Camper van?
Kana kufamba neCamper kwatogadzirwa kune vanhu vane mweya unoziva, fungidzira avo vanozvigadzira kombi pachavo! Maitiro aya angave nezvikamu zviviri zvakakosha: gadzira yakazara camperización uye homologate mota pachayo. Kune ino camperization isu taizofanira kuve neinjiniya (hachisi chirongwa chekuzviita pachedu kana) uye kazhinji mutengo wese inogona kusvika kwakatenderedza 6000 euros. Zvinoenderana, pamusoro pezvose, pa mhando yezvinhu zvinoshandiswa and of the huwandu hwemidziyo yaunoda nayo kuva neimba yako nyowani. Funga nezvazvo se "remodel" yeimba yako.
Ndeipi nguva yakanakisa yekuita nzira nevha?
Sezvatakakuudza iwe muchinyorwa chino, mu The Indian Face Isu takacherekedza iyi rebound mukunyoreswa kwemaveni mumwaka wezhizha munyika medu. Zvichida, uchiona izvi, iwe unoda kuve unowedzera zvishoma "imwe sarudzo" maererano nemazuva kuitira kuti urege kuenderana nemuvakidzani wako mune yechishanu, uyo akafarirawo pfungwa yekuenda munzira yevan. Asi zvakakosha kuti uzive kuti ruzivo rwako rwuchasiyana zvakanyanya zvichienderana nemamiriro ekunze. Iyo primaveraSemuenzaniso, iyi inonakidza sarudzo kana iwe uchida kufamba uchitenderera Spain.
Nyanzvi dzinokurudzira kunyudza tsoka dzako mujecha kanokwana kamwe pagore, uye kurega maziso ako achirasika pakati pemumvuri wakasiyana uyo bhuruu yegungwa unotipa. Ndokusaka takuunzirai